Home » Vaovao momba ny fizahantany » Santiago dia manome ny antsasaky ny fizahan-tany any Chile
Ny renivohitr'i Chile dia ivon-toerana manan-danja amin'ny sidina anatiny sy iraisam-pirenena
Ny kaontin'i Santiago momba ny antsasaky ny hetsika fitsangantsanganana sy fizahan-tany any Chile (48.9%), mitentina US $ 3.9bn, satria ny renivohitr'i Chili dia ivon-toerana lehibe ho an'ny sidina anatiny sy iraisam-pirenena, hoy ny tatitra vaovao nataon'ny World Travel & Tourism Council. (WTTC), fiantraikan'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Amerika Latina.
Na dia nihanatanjaka aza ny lanjan'ity sehatra ity amin'ny toekarenan'i Santiago hatramin'ny 2006, ny anjarany amin'ny harin-karena faobe amin'ny ankapobeny dia ambany dia ambany raha oharina amin'ireo tanàna hafa amin'ny fanadihadiana, 3.2%, satria ny tanàna dia miankina betsaka amin'ny indostria hafa toy ny famokarana akanjo sy fitrandrahana varahina.
Ny harinkarena faobe momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Santiago dia nahita fitomboana 7.5% tao anatin'ny folo taona lasa ary ny fironana dia kasaina hitohy miaraka amin'ny fidiram-bola avo roa heny afaka folo taona ho avy ary ny tahan'ny fitomboana 7.1%, izay mampiharihary izany amin'ny firenena amin'ny ankapobeny. Hahazo tombony bebe kokoa ity sehatra ity amin'ny fampifandraisana fanampiny raha vao manokatra vavahady seranam-piaramanidina iraisampirenena vaovao ny tanàna amin'ny taona 2020. Asa maherin'ny 110,000 eto an-drenivohitra, 3.3% amin'ny asa rehetra any Santiago, no lazaina fa mivantana amin'ny Travel & fizahan-tany.
Ny tsena iraisam-pirenena dia mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny fizahan-tany any Santiago; ny anjaran'ny fandaniany dia nitombo hatramin'ny 21% tamin'ny 2006 ka hatramin'ny 24% tamin'ny 2016. Manakaiky ny ampahatelon'ny fangatahana iraisam-pirenena dia avy any Etazonia. Mifanohitra amin'izany, ny mpitsidika amerikana dia tsy misy afa-tsy 5% amin'ny fandaniana iraisampirenena manerana an'i Chile, milaza fa maro ny Amerikanina no tsy mikasa hihoatra ny renivohitra.
Raha mijery any an-dafin'ny renivohitra, ny totalin'ny fandraisana anjaran'ny Travel & fizahan-tany any Chile ho an'ny harinkarena faobe dia CLP16,852.1bn (US $ 24.9bn), 10.1% ny harin-karena faobe tamin'ny taona 2016. Ny totalin'ny fandraisana anjaran'ny Travel & fizahantany amin'ny asa, ao anatin'izany ireo asa tohanan'ny ankolaka ny indostria dia 9.8% amin'ny asa manontolo (asa 793,500 160,500). Mandritra ny folo taona ho avy, asa vaovao XNUMX XNUMX no antenaina hoforonina amin'ny alàlan'ny hetsika Travel & fizahan-tany manerana ny firenena.
Hafatra avy amin'ny Lehiben'ny Fizahan-tany any Hawaii